ငယ်ငယ်က ကျောင်းမှာ "ဂျပုမ၊ ရုပ်ဆိုးမ" လို့ခေါ်ပြီး နှိမ်ခဲ့တဲ့သူတွေကို သူမရဲ့ လက်ရှိပုံရိပ်လေးနဲ့ ချေပြလိုက်တဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ - Cele Connections
ညှို့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုပြင်းတဲ့ မင်းသမီးလေး ပတ်ထရစ်ရှာက ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက မော်ဒယ်တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ယနေ့ထက်တိုင် အောင်မြင်မှု ရရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ဘိုဆန်တဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ အပြင်အဆင်တွေကြောင့် လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုခံနေရသူတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ပတ်ထရစ်ရှာက လက်ရှိမှာတော့ သူမရဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ရပ်နားထားပေမယ့် ပရိသတ်တွေအတွက် သူမရဲ့ အမိုက်စားဓာတ်ပုံတွေနဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုကို သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေတဆင့် မျှဝေပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုပြီး မိမိုက်လာတဲ့ အပြင်အဆင်တွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိလာတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာကနေ ဒီကနေ့မှာ မြင်ရသူတိုင်း ရင်သပ်ရှုမောသွားစေမယ့် ဓာတ်ပုံတွေကို ချပြလာခဲ့ပါတယ်။ ပတ်ထရစ်ရှာက သူမရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို မျှဝေရင်း “Hello to the bullies who called me “ugly” and “ja pu ma” at school. 😊” လို့ဆိုက သူမကို ငယ်ငယ်က ကျောင်းမှာ “ဂျပုမ၊ ရုပ်ဆိုးမ” လို့ခေါ်ပြီး နှိမ်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ချေပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပတ်ထရစ်ရှာကတော့ ငယ်ငယ်က “ဂျပုမ၊ ရုပ်ဆိုးမ” လို့ အခေါ်ခံခဲ့ရပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ မြင်သူတိုင်းကျ ချစ်ရတဲ့ မင်းသမီးလေးဖြစ်လို့နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ငယျငယျက ကြောငျးမှာ “ဂပြုမ၊ ရုပျဆိုးမ” လို့ချေါပွီး နှိမျခဲ့တဲ့သူတှကေို သူမရဲ့ လကျရှိပုံရိပျလေးနဲ့ ခပြွေလိုကျတဲ့ ပတျထရဈရှာ
ညှို့မကျြဝနျးတှနေဲ့ ဆှဲဆောငျမှုပွငျးတဲ့ မငျးသမီးလေး ပတျထရဈရှာက ဆယျကြျောသကျအရှယျကတညျးက မျောဒယျတဈယောကျအဖွဈ အနုပညာလောကထဲကို ဝငျရောကျလာခဲ့ပွီး ယနထေ့ကျတိုငျ အောငျမွငျမှု ရရှိနတော ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ ဘိုဆနျတဲ့ ဝတျစားဆငျယငျမှုနဲ့ အပွငျအဆငျတှကွေောငျ့ လူငယျပရိသတျတှရေဲ့ အာရုံစိုကျမှုခံနရေသူတဈယောကျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ ပတျထရဈရှာက လကျရှိမှာတော့ သူမရဲ့ အနုပညာလုပျငနျးတှကေို ရပျနားထားပမေယျ့ ပရိသတျတှအေတှကျ သူမရဲ့ အမိုကျစားဓာတျပုံတှနေဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုကို သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာကနတေဆငျ့ မြှဝပေေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
တဈနထေ့ကျတဈနေ့ ပိုပွီး မိမိုကျလာတဲ့ အပွငျအဆငျတှနေဲ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိလာတဲ့ ပတျထရဈရှာကနေ ဒီကနမှေ့ာ မွငျရသူတိုငျး ရငျသပျရှုမောသှားစမေယျ့ ဓာတျပုံတှကေို ခပြွလာခဲ့ပါတယျ။ ပတျထရဈရှာက သူမရဲ့ ဓာတျပုံလေးတှကေို မြှဝရေငျး “Hello to the bullies who called me “ugly” and “ja pu ma” at school. 😊” လို့ဆိုက သူမကို ငယျငယျက ကြောငျးမှာ “ဂပြုမ၊ ရုပျဆိုးမ” လို့ချေါပွီး နှိမျခဲ့တဲ့သူတှကေို ခပြွေလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပတျထရဈရှာကတော့ ငယျငယျက “ဂပြုမ၊ ရုပျဆိုးမ” လို့ အချေါခံခဲ့ရပမေယျ့ လကျရှိမှာတော့ မွငျသူတိုငျးကြ ခဈြရတဲ့ မငျးသမီးလေးဖွဈလို့နပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
တစ်ယောက်တစ်နေရာစီဖြစ်နေပေမယ့်လည်း ပရိသတ်တွေသိချင်နေတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို Live လွှင့်ပြီးဖြေပေးခဲ့တဲ့ အဲလက်စ်ရဲ့ သားနဲ့သမီး
ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ကိုယ်ချင်းမစာ ဝေဖန်ရှုံ့ချတာတွေကို ဖတ်တောင်မဖတ်ဝံ့ဘူးလို့ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်